I-Casita Jardin Secreto iyingxenye yesakhiwo esihlanganisa i-villa enkulu eseduze, kodwa ehlukene, nezindlu zamadolobha ezintathu ezinhle.
Ekwaziwa nangokuthi ama-casitas, lezi zindlu zasedolobheni ezintathu zihlanganyela ichibi le-Jacuzzi nolwandle kanye nethala eliwuphahla elimangalisayo ukuze lishiswe yilanga futhi liphole, linendawo yokugeza, imibhede yelanga emibili nezinye izinto zokungcebeleka nezemidlalo.
Casita Jardin Secreto has ahlukene izikhala ezimbili ongaphandle, i-eningizimu-mpumalanga ebheke ithala ukufinyelela egumbini lokuphumula futhi ekhishini, futhi ube insimu enhle obiyelwe ngodonga, kufinyeleleke kusukela ekamelweni, kuba enyakatho-ntshonalanga ebheke phambili, ebusweni, ekahle ethatha ukulala ... ukuphumula kuqinisekisiwe. I-Casita Jardin Secreto ilungele ukuvakasha kwezothando nezothando.
Lapha ungenza yonke into ngezinyawo, ulwandle luyi-200 m, izitolo nezindawo zokudlela 150 m.
Sizithanda izingane kakhulu ... kodwa ukuze siqinisekise ukuthi unokuthula kwengqondo okuphelele, le ndawo igcinelwe labo abaneminyaka engaphezu kwengu-16 ubudala.